ကိုယ့်ကားကို သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းများ
အသုံးပြုသူတိုင်း (ဝါ) ကားပိုင်ရှင်တိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ကားကို ရေရှည်အသုံးပြုချင်ကြပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ နည်းလမ်းတွေကတော့ အများကြီးပါ။ အရေးကြီးဆုံးအချက်က စည်းကမ်းရှိရှိအသုံးချဖို့ပါပဲ။ စည်းကမ်းရှိရှိ ဘယ်လို အသုံးချကြမလဲ။ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အကြောင်းအရာတွေက အများကြီးပါ။ အရှေ့မှာလည်း ကိုယ့်ကားကို ဘယ်လိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာမျိုးတွေ ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ကားကို ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကိုပါ။ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
ဒါကတော့ ပြောနေကျနဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချက်ပါ။ တာယာကို စစ်ဆေးခြင်းက အသက်အန္တရာယ်ကို များစွာအထောက်အကူပြုစေတယ်ဆိုတာ အစက ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အကျိုးရှိစေမယ့် အချက်တစ်ခု ထပ်ပေါင်းပြောလိုက်ချင်ပါသေးတယ်။ အဲဒီလိုတာယာကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် လောင်စာစွမ်းအားကို ၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တက်စေတယ်လို့ နိုင်ငံတကာက မော်တော်ယာဉ်အကြောင်း လေ့လာတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုထားပါတယ်။ ဘယ်လိုကြောင့် သက်သာစေတာလဲဆိုတော့ တာယာတွေကို တိကျတဲ့ လေပေါင်ချိန် ဖြည့်ပေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထက်လောင်စာဆီစွမ်းအားကို ၆ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ချွေတာနိုင်စေဖို့ သင့်ရဲ့ကားကို အကြမ်းခံတဲ့တာယာတွေ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်လိုက်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံက ဆီအရည်အသွေးတွေရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကိုတော့ သုံးတဲ့သူတိုင်းက မပြည့်ဘူးလို့ပဲ ဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ မှန်ကန်တဲ့ဆီထည့်သုံးဖို့အတွက် ဒီက ယာဉ်တွေအတွက်တော့ အခက်အခဲတော်တော်ရှိကြပါတယ်။ ဆီအရည်အသွေး မပြည့်ဝခြင်းကြောင့်ပဲ ဒီက ကားတွေတော်တော်များများ မကြာခဏဆိုသလို ဝပ်ရှော့ပြေးနေကြရပါတယ်။ မော်ဒယ်လ်အောက် လေ ဝပ်ရှော့ရောက်လေပါပဲ။ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်သူတွေကတော့ အောက်တိန်း ၉၅ လို၊ ၉၇ လို၊ Premium ဒီဇယ်လို အရည်အသွေးမြင့်ဆီတွေ ထည့်ကြပေမယ့် မတတ်နိုင်သူများတဲ့ (လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များတဲ့) ဒီမှာတော့ ၉၂ လို၊ ရိုးရိုဒီဇယ်လိုမျိုးပဲ ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြရပါတယ်။ ဒီလိုဆီတွေကပဲ အရည်အသွေးမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေတာပါ။ ဟိုတစ်လောတုန်းကတောင် ဆီအရည်အသွေးမပြည့်ဝတဲ့ မော်လမြိုင်က ဆီဆိုင်တွေကို ဒဏ်ကြေးငွေ ငါးသိန်းစီ တပ်ရိုက်လိုက်တယ် ဆိုတဲ့သတင်းတွေ မီဒီယာတွေမှာ ရေးသားခဲ့ကြပါသေးတယ်။
မှန်ကန်တဲ့ဆီတွေ ထည့်ခြင်းအားဖြင့် ကားကို ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်သလို ဝပ်ရှော့ကိုလည်း အိမ်ဦးနဲ့ ကြမ်းပြင်လို သွားရမယ့်အရေးက ရှောင်လွှဲနိုင်စေမှာပါ။
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်။ နေ့တိုင်း၊ ဒါမှမဟုတ် ချေး(ဂျီး)၊ ဖုန်၊ ငှက်ချေးလိုအရာမျိုးတွေ များလာပြီ ဆိုရင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ လိုလာပြီပေါ့။ ဒီလိုသန့်ရှင်း ရေးလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီး ရရှိစေမှာပါ။ တောက်ပြောင်နေရင် လူတွေက ကိုယ့်ကားလေးကို ငေးနေမှာပေါ့။ ညစ်ပတ်နေရင်တော့ လူကိုလည်း အထင်သေးသွားနိုင်တယ်လေ။ ကားတောင်ညစ်ပတ်နေတာ လူကလည်း မသန့်ရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကားလေးကို သန့်ရှင်းရေး ပုံမှန်လုပ်ကြစေချင်ပါတယ်။
လမ်းပေါ်မှာ ကားကို သက်သာစေမယ့်နည်းလမ်းများ
လမ်းပေါ်မှာ ကားကို မြန်မြန်မောင်းရင် လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုနဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ပိုဖြစ်စေပါတယ်။ မြန်မြန်ရောက်ချင်တိုင်း အရမ်းမမောင်းကြပါနဲ့။ အခန့်မသင့်ရင် ယာဉ်မတော်တဆမှုပါဖြစ်ရင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေအပြင် အသက်ပါဆုံးရှုံးနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အရမ်းမြန်မြန်မမောင်းကြပါနဲ့။
သင့်ကားရဲ့ မြန်နှုန်းကို ၈၀ ကနေ ၁၁၃ ကီလိုမီတာ အထိ အရှိန်မြှင့်လိုက်တာနဲ့ ဓာတ်ဆီဘယ်လောက် ပိုကုန်သွားပါသလဲ။
(က) ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းလား၊
(ခ) ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းလား၊
(ဂ) ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလား၊
အဖြေကတော့ . . .
(၁) ၈၀ ကီလိုမီတာမှာဆို ဓာတ်ဆီ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ပိုကုန်ပါတယ်။
(၂) ၉၇ ကီလိုမီတာမှာဆို ဓာတ်ဆီ ၉ ရာခိုင်နှုန်း ပိုကုန်ပါတယ်။
အရှိန်တင်ခြင်း၊ မြန်နှုန်းမြင့်ခြင်း၊ ဘရိတ်ဖိအုပ်ခြင်းတွေဟာ လောင်စာစွမ်းအားကို မြို့တွင်းမှာဆို ၅ ရာခိုင်နှုန်းလျော့ကျစေပြီး အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာ ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျစေပါတယ်။
ဂီယာကို အမြင့်နဲ့ ထားမောင်းမယ်ဆိုရင် အင်ဂျင်မြန်နှုန်းကို လျှော့ချပေးသလို လောင်စာစွမ်းအားကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မှတ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ ၂၀၀၀ rpm နားလောက်ပဲ မောင်းသင့်ပါတယ်။
လောင်စာချွေတာချိန် အေးနေစေမယ့် နည်းလမ်းများ
၈၀ ကီလိုမီတာအောက်မှာ မောင်းနှင်မယ်ဆိုရင် အဲကွန်းကို ပိတ်ပြီး ပြတင်းပေါက်ကို ဖွင့်မောင်းမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ကားကို အေးနေစေမှာပါ။ ၈၀ ကီလို မီတာအထက်မောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ကားအဲကွန်းကိုဖွင့်ပြီး ပြတင်းပေါက်ပိတ်မောင်းဖို့လိုပါတယ်။ အရှိန်အရမ်းမြင့်တာကြောင့် အပြင်ကလေက ကိုယ့်ကို အာရုံနောက်စေပါတယ်။
အင်ဂျင်ရဲ့ ပါဝါအလေးချိန်အချိုးကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း
ဒီလိုအင်ဂျင်ရဲ့ စွမ်းအားကို အလေးချိန်အချိုးကို မြှင့်တင်ပေးတာကြောင့် ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးသုံးခုရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ . . .
• လောင်စာအား ဖိအားအမြင့်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့ခြင်း၊
• အရှိန်မြှင့် အားဖြည့်ပေးခြင်း၊
• Valve တွေကို ချိန်ညှိပေးနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဂျင်သေးပြီး စွမ်းအားကြီးတဲ့ အင်ဂျင်တွေကြောင့် လောင်စာစွမ်းအား ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းတက်စေသလို လောင်စာနည်းနေချိန်မှာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက် ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျစေပါတယ်။ အင်ဂျင်ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလည်း ပိုမိုတိုးတက်စေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် နောက်ပိုင်းကားတွေမှာဆိုရင် အင်ဂျင်ကို သေးသေးထုတ်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမြင့်တဲ့ အင်ဂျင်တွေအဖြစ် ထုတ်လုပ်လာကြတာကို တွေ့လာရပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေကလည်း အရင်တုန်းကလည်း အင်ဂျင်ကြီးတာကို မကြိုက်ကြတော့ဘဲ အင်ဂျင်သေးပြီး စွမ်းအားမြင့်တဲ့ အင်ဂျင်တွေကိုပဲ သဘောကျလာပါတယ်။
ကားတစ်စီးရဲ့ အလေးချိန်ဟာ ကိုယ့်ကားရဲ့ ဆီစားနှုန်းနဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှုအပေါ်တို့ကို သက်ရောက်စေပါတယ်။
ကားတစ်စီးရဲ့ အလေးချိန် ၁၀ ကီလိုဂရမ် လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း ၁ ဂရမ်အထိ လျှော့ချပေးသလို လောင်စာစွမ်းအားကိုလည်း သုည ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
ပါဝါမြင့် ကလပ်နှစ်ခု ဂီယာစနစ်
ဒီဂီယာစနစ်ကြောင့် အကျိုးကျေးဇူးတော် တော်များများကို ရရှိစေပါတယ်။ ဘယ်လောက်အထိလဲဆိုတော့ ဆီစားနှုန်းကိုတော့ ၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
• စုံနဲ့ မ ဂီယာစနစ်တွေအတွက် ခွဲခြားထားတဲ့ကလပ်များ
• ကွန်ပျူတာနဲ့ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊
• လောင်စာစွမ်းအင်ကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊
(၉ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သက်သာစေနိုင်)
လေကို ရွေ့လျားမှုစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း
• အင်ဂျင်အတွင်းသို့ လေဖြတ်သန်းမှုကို ထိန်းညှိပေးတယ်။
• အင်ဂျင်အပူချိန်အား ထိန်းညှိပေးထားတယ်။
• လေအားရွေ့လျားမှုစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။
• ဆီစားနှုန်းကို ၁၀၀ ကီလိုမီတာနှုန်းမှာ သုည ဒသမ ၁၅ ကနေ သုည ဒသမ ၂ လီတာအထိ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
• ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို ၂ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ကားကို ဘယ်လိုသက်သာစေမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုအကြောင်းအရာတွေအပြင် တခြားကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို Motoring ကဏ္ဍမှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။ အခုအကြောင်းအရာကိုတော့ Ford Motor Group နဲ့ နိုင်ငံတကာ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် သင်တန်းတွေ လိုက်လံပို့ချနေတဲ့ RMA အကယ်ဒမီတို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ Driving Skills for Life ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကနေ ကိုးကားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။